अपराधी नभएको एकमात्र देश जहाँ जेल पनि खाली छ « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
अपराधी नभएको एकमात्र देश जहाँ जेल पनि खाली छ
२७ फाल्गुन २०७५, सोमबार १६:४९
संसारको कुनै कुनामा अपराध बढिरहेको छ भने कतै स्वात्तै घटेका पनि छन् । यद्यपी, एउटा युरोपेली देश यस्तो पनि छ जहाँ अब एकजना पनि त्यस्ता अपराधी छैनन् जसलाई जेलमा राख्न सकियोस् । यति पढिसक्दा पनि तपाईंलाई विश्वास लागिरहेको छैन होला तर धर्तीमा एउटा यस्तो पनि देश छ जहाँका जेल खाली छन् ।
नेदरल्याण्डको जेल बन्द हुँदा दुई प्रकारका महत्वपूर्ण परिवर्तन हुनेछन् । सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने घट्दो अपराध दर अर्थात् सुरक्षित देश । रोजगारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने जेलमा काम गर्नेहरु बेरोजगार हुनेछन् । नेदरल्याण्डको जेल बन्द हुनुको अर्थ त्यहाँ लगभग २ हजार मानिसहरुले जागिर गुमाउनेछन् जसमा ७ सयलाई सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराइएको अन्य स्थानमा ट्रान्सफर गरिनेछ ।
यद्यपी, जेल बन्द हुनुको अर्थ यो पनि हो कि नेदरल्याण्ड एक देश, एक प्रणाली, एक सरकार र नागरिकको रुपमा सफल भएको छ । त्यहाँ खाली जेलको मुद्दा यस्तो बिन्दुमा पुगेको थियो कि नेदरल्याण्ड आफ्नो सुविधा र व्यवस्था चलाउनका लागि नर्वेबाट कैदी मगाउनु परेको थियो । त्यहाँ कैदीका लागि इलेक्ट्रोनिक एंकल मोनिटरिङ सिस्टम छ । यो सिस्टममा उनीहरुको खुट्टामा एउटा यस्तो डिभाइस लगाइन्थ्यो जसमार्फत् उनीहरुको लोकेशन ट्रेस गर्न सकिन्थ्यो ।
यो डिभाइसले एउटा रेडियो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल पठाउँछ जसमा अपराधीको स्थान पत्ता लाग्थ्यो । यदि कोही अपराधी कुनै निश्चित सीमाभन्दा बाहिर जान्थे तब यसबारे पुलिसले सूचना पाउँथे ।
प्रकाशित मिति: २७ फाल्गुन २०७५, सोमबार १६:४९
वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए सधैं जवान रहने रहस्य थाहापाउनुहोस्
संसारमा बैज्ञानिकले नयाँनयाँ कुराको खोजतथा अन्नुसन्धान गरिरहेका हुन्छन् । वैज्ञानिकहरूले मानव शरीरको हाडमा जवानीको रहस्य
एक मात्र स्तनधारी प्राणी चमेरो रातको अन्धकारमा कसरी उड्न सक्छ ?
उड्न सक्ने एक मात्र स्तनधारी प्राणी हो, चमेरो । पातलो कपडा झैं झिल्लीदार पखेटा हुने
जान्नुहोस् ! सर्पको यौन जीवनको रोचक तथ्य : सम्भोगपछि भालेलाई नै खाने
सेक्स भनेको एक यस्तो चिज हो जुन प्राणाीको लागि पनि आवश्यक हुन्छ । संसारलाई सृष्टि
लकडाउनको बेला अमेरिकामा सित्तैमा घर घरमा गई कण्डम डेलिभरी गरिँदै